Ahoana no ahitanao ny teny fanalahidy avo lenta amin'ny lisitry ny fanatsarana ny Amazon?
Raha manana vokatra azo ampiasaina hivarotana amin'ny Amazon ianao dia tokony hanana tetika tsara amin'ny fomba hivarotana azy. Mila manao ny mpanjifa mety hividy ny vokatra ho anao manokana ianao fa tsy ny mpifaninana tsena niche. Eo amin'ny faran'ny fampielezan-kevitra fanatsarana anao dia mila manao fikarohana lalindalina kokoa ianao. Mba hanaovana izany amin'ny fomba tsara dia azonao atao ihany koa ny manofa manam-pahaizana amin'ny sehatr'asa fanamafisana Amazon na mampiasa rindrambaiko fikarohana sandoka manokana. Zava-dehibe ny hitadiavana ny dikan-teny rehetra natao tanjona, tsy hiverenana amin'ity lohahevitra ity amin'ny ho avy. Ny famadihana ireo teny fanalahidy manan-danja sasany dia mety hitarika ho amin'ny vola, ary ny fahafaha-manao vaovao dia very. Ny tenifototra izay manana volavolam-pikarohana ambony ao Amazon dia hanampy anao hitsangana tsara kokoa noho ireo mpifaninana aminao ary hanao fivarotana tsaratsara kokoa.
Hodinihinay ato amin'ity lahatsoratra ity ny fomba fanao mahazatra sasany mba hanatsarana ny fikarohana teny sy hanatsarana ny lisitry ny sangisangy amin'ny fikarohana amazonaly.Ankoatra izay, hiresaka momba ireo fitaovana fikarohana fototra tsara indrindra izay hanampy anao amin'ny fanampiana fanampiny amin'ny dingan'ny lisitry ny lisitra Amazonanao ianao.
Ny fikarohana fikarohana Keyword dia ampahany manan-danja ao amin'ny lisitry ny fanatsarana ny lisitry ny lisitry Amazon. Mitaky ny fikarohana ireo teny manan-danja sy miezaka mikaroka amin'ny vokatra voafaritra. Ny teny fikarohana avo lenta dia ireo teny izay mety hampiasain'ny mpanjifa anao mba hahitana ny vokatrao amin'ny pejy voalohan'ny fikarohana Amazon.
Fikarohana fikarohana momba ny teny fikarohana dia tokony hampidirina asa toy ny fanadihadiana ara-tsakafo, fanaraha-maso ara-barotra sy ny fanadihadiana fifaninanana. Ankoatr'izay, mila mandinika ny fitondrantenan'ny mpividy ianao mba hahatakatra ny zavatra tadiaviny amin'ny ankamaroan'ny tranga.
Raha ny lalàna dia tsy azo atao mihitsy ny manangona ireo fampahalalam-baovao ireo amin'ny ankapobeny. Izany no mahatonga ny ankamaroan'ny mpivarotra an-tserasera hampiasa rindrambaiko an-tserasera.
Manoro hevitra aho hampiasa ireto fitaovana manaraka ireto araka izay azon'izy ireo hanome anao ny marina indrindra:
Ny fitaovana ampiasaina matetika amin'ny fikarohana teny fanalahidy dia ny Google Keyword Planer. Azonao atao ny mampiasa ny angon-drakitra nomen'ity fitaovana ity ho toy ny proxy ho an'ny tranonkala Amazon-nao. Na izany aza, mila mahatsapa ianao fa tsy mitovy amin'ny Google ny rafitra Amazon. Izany no mahatonga ny soso-kevitry ny teny fanalahidy, azonao ampiasaina ity fitaovana ity, tsy ho marina. Tokony hampihatra ireo filalaovana Amazonana ianao mba handraisana ny karazana sy ny isan'ireo karoka natao ho an'ny vokatra amin'ny Amazon.
Ity no laharana Keyword Suggest Tool ao amin'ny Internet. Izy io dia manome autosuggest data ho an'i Amazon, Google, YouTube, ary Bing. Tena tsara raha tianao ny mampitaha ny fahasamihafana amin'ny fomba fijerinao ny mpanjifa mitady ny rafitra fikarohana.
Ity fitaovana ity dia afaka manoro-dàlana ny teny filamatra misimisy kokoa amin'ny alàlan'ny fametrahana ny teny fanalahidy izay nampidirinao tao amin'ny rafitra. Rehefa misafidy ireo valiny voavolavola ianao dia tsindrio ny bokotra soso-kevitra, ny fitaovana dia manatsara ny soso-kevitry ny teny rehetra amin'ny alàlan'ny boaty fikarohana ao Amazon. Ity fikarohana ity dia hanome fehezanteny manokana azo atao.
Raha vao tonga any Amazonia ianao ary te hanapa-kevitra hoe inona ny nosy ara-barotra indrindra ho an'ny zavatra ilaina, Amazon Niche Analyzer no ilainao. Manampy amin'ny famaritana ny vokatra azonao amidy sy amin'ny vidiny. Ankoatra izany, mampiasa an'io fitaovana io ianao, afaka manombatombana ny habetsaky ny vola azonao avy amin'izany.
Ankoatra izany, ity fitaovana ity dia hanampy anao hanaraka ny paikady sy ny lahatran'ny mpifaninana. Azonao atao ny mamantatra ny teti-kevitr'izy ireo, manara-maso ny teny fanalahidy manaparitaka ary manombantombana ny fidiram-bola.
Semrush dia rindrambaiko fanatsarana fanatsarana izay ampiasaina amin'ny tanjona maromaro fanatsarana, anisan'izany ny fikarohana teny. Ity fitaovana ity dia afaka manome anao ny teny fikarohana sy zarazaraina indrindra ao anatin'ny minitra vitsy. Ankoatra izany, dia mampiseho ny teny fanalahidin'ny mpifaninana aminao sy ny fomba ambarany amin'izy ireo. Ny zavatra rehetra ilainao dia ny handikana ny lisitry ny lisitry ny mpifaninana anao, ary ny fitaovana Semrush dia hanome anao ny teny fototra tokana nomeny.
Ahoana no ahafahan'ny fikarohana siantifika hampitombo ny fivarotana amin'ny Amazon?
Ho hita ao amin'ny pejy valin'ny fikarohana ny vokatra Amazon raha ny lisitrao dia ahitana ny teny fototra rehetra izay nosoratan'ny mpanjifa ao anaty fikarohana. Raha tsy ampy iray minitra iray monja ianao, dia tsy misy voka-tsoa hita ao amin'ny valin'ny fikarohana ny vokatrao, ary avy eo, tsy hamoahanao an'io fivarotana io.
Ny tanjona voalohany amin'ny fikarohana ny teny fanalahidy dia ny mamorona ny lisitry ny teny fikarohana rehetra mifandraika amin'ny vokatra manokana. Raha toa ka azonao atao ny mametraka tsara ny volan'ny fikarohana ambaratonga Amazon ao amin'ny lisitry ny lahatsoratrao, ny fikarohana lazainao dia mitarika ho amin'ny zava-misy fa ny mpanjifa dia hahita ny vokatrao, tsindrio eo ary farany dia lasa mpividy anao.
Ahoana no fomba hitadiavana teny fohy momba ny fandefasanao ny vokatra Amazon anao?
Ny fianjeranana voalohany, dia nanamarika aho fa mila rafitra ara-politika ianao rehefa manao fikarohana teny fototra ho an'ny vokatrao. Izany dia hanampy anao ho marim-pototra ary tsy hamoy ny fampahalalana ilaina. Ny teny fanalahidy mifototra amin'ny sokajy samihafa dia ahafahanao ho rafitra, ary tsara. Ireo teny fanalahidy ireo dia mety ho voalohany sy faharoa. Ireo teny fototra fototra dia ireo izay mizara ny vokatra fototra. Mety ho teny filamatra momba ny fikarohana izay mamantatra ny vokatra ary mitaky ny endriny tena ilaina. Ny teny fanalahidy faharoa dia teny fohy kokoa amin'ny fikarohana izay azo ampiasaina rehefa mikaroka ireo teny fototra fototra. Azo ampiharina amin'ny teny izay mahakasika vondron'olona kinendry manokana, karazana olona, ​​karazana fampiasana, na toetra manokana hafa.
Noho izany, mba hampisy vokatra amin'ny fikarohana ataonao, dia mila mizara ny teny filamatra sasantsasany amin'ny sokajy roa fototra - voalohany sy faharoa. Amin'izao fotoana izao, dia hanampy anao hahita ny fiarahamonina mikaroka indrindra izay afaka manatsara ny fari-piadidinao Amazon Source .